Onoota Ganjii fi Gullisoo keessatti Ajjeefamuun Awwaalcha Dhorkamuu Qeerroowwan Oromoo - Independent Oromia
Gochaaleen hammeenyaa loltoota mootummaa impaayerattiin Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran hammaachaa bubbuluun, Roobii kaleessaa (Caamsaa 13, 2020), Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Ganjii keessatti, Qeerroowwan Oromoo sadii, Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa jedhamuun, Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaan leenjifamanii, baatiilee muraasa dura gama Konyaalee Oromiyaa Lixaa fi Kibbaatti bobbaafamaniin ajjeefamuu.
Ajjeesanii, du'aatti roorrisuu...
Kamisa har'aas, haaluma wal-fakkaatuun, achuma Lixa Wallaggaa, Ona Gullisoo, Ganda Caancoo jedhamu keessatti Qeerroowwan Oromoo sadii, Isin deggertoota ABO'ti; WBO waliin hidhata qabdu; isintu karaa itti agarsiisa;... jedhamuun, poolisoota kanaan ajjeefamuu isaanii, odeessa jiraataa bakkasii irraa bilbilaan arganneen mirkaneeffachuun danda'amee jira.
Ajjeechaan kun kan raawwatame ganama har'aa toora sa'aa 3:00 yommuu ta'u, waardiyyootni impaayerattii dhiiga Ilmaan Oromoo lolaasuu araada godhatan garuu, reeffi dargaggoota kanaa akka lafaa hin kaafamneef jecha, guyyaa guutuu nama irraa ittisaa olanii jiru.
Daba dabaan olii, kara-deemaa mara karaa irraa humnaan maqsanii, beektaa ilaali; ilaaltu malee hin dabartu jechuun, du'aa nafa Ilmaan Oromoo daawwiif oolchaa ooluu isaanii kan RSWO'tti hime Oromtichi, dargaggoota ajjeefaman sadan keessaa kan maqaan yaadate lama – Iddoosaa fi Lijaalam – maqaa dhahuun, akka lakkoofsa yeroo biyyasiitti hanga sa'aa 12:00'ttillee reeffi Qeerroowwan sadanuu bakkuma itti bitimaman sanatti ugguramee jiraachuus dubbata.